Farqiga u dhexeeya amaahda iyo debit | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Farqiga u dhexeeya amaahda iyo deynta
Susana Maria Urbano Mateos | | Banca, Amaahda
Labadaba xisaabaadka amaahda iyo deynta, waxay ka mid yihiin nolol maalmeedkeena, waana in kolba marka ka dambeysa, qaababka lacag bixinta la beddelay, oo ah Kaararka deynta iyo kuwa ugu fiican. Mid ka mid ah faa'iidooyinkooda ugu waaweyn ayaa ah inay noo oggolaadaan inaan si joogto ah u helno lacagteenna, sidaasna u fududeyno in badan oo ka mid ah howlaha lacag bixinta ee la fulinayo. Faa'iidada kale ee ay bangiyadu naga siinayaan xisaabaadyadan ayaa ah sida ugu fudud ee aan ugu maarayn karno lacagaha.
Laakiin xitaa haddii aan tan ka faa'iideysannay nooca xisaabaadka ayaa jira suurtagalnimada in aanaan si cad u ogayn kala duwanaanshaha u dhexeeya labadan nooc xisaabood, iyo sidoo kale suurtagalnimada inaynaan sida ugu badan uga faa iidaysan. Taasi waa sababta maqaalkan aan si cad oo qeexan uga hadli doonno maxay yihiin khilaafaadka jira.
1 Hababka lacag bixinta
5 Aynu soo qaadanno tusaale dhab ah.
Farqiga ugu horeeya ee la xuso waa Hababka Bixinta taas oo ay noo ogolaadaan inaan marin u helno. Xisaabaad kasta wuxuu na siinayaa fursado kala duwan, kuwani waa qaar ka mid ah.
Aynu ku bilowno ka hadalka xisaabaadka deynta, kuwaas oo u oggolaanaya a bixinta toos looga qaado koontadayada keydka ama koontadayada hubinta. Sidan oo kale, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in xadka bixinta aan sameyn karno ay tahay iyadoo loo eegayo sanduuqa koontadayada; Tusaale ahaan, waa in la yidhaa hadaan galnay wax u dhigma 100 euro koontadeena, lacagta ugu badan ee aan bixin karno waa 100 euro.
Qaab gaar ah, lacag bixinta ayaa lagu qalabeyn karaa kaarka deynta lacag bixinta, halka kharashkeena ugu badan uu yahay lacagta aan gacanta ku hayno. Marka, si loo sameeyo lacag bixin ballaaran, waxa ay tahay inaan sameyno waa inaan kordhino lacagaha ku jira xisaabaadkayaga.
Marka laga hadlayo kaarka bangiga waxaan tixraaceynaa habka lacag bixinta ee aruurinta iibka dib loogu dhigay illaa bisha xigta. Waana muhiim in la xuso in lacag-bixintan la samayn karo xitaa haddii koontooyinkayagu aysan haysan lacag.
Halkan waa inaan ku caddeynnaa 2 qodob; waxa ugu horeeya ayaa ah habka lacag bixinta waxay ficil ahaan deyn kula jirtaa bangiga. Sidan oo kale, waxaa nalooga baahan yahay inaan ku bixino iibsashada wakhti go'an oo cayiman. Laakiin si aan u daboolno bixinta deyntayada bisha xigta waa inaan helnaa heer dakhli gaar ah, waa halka aan ku caddeynay qodobka labaad.
Si bangigu u hubiyo inaan awoodi karno inaan bixino deynta waqtigeeda wuxuu xaddidayaa "amaahda" naloo sameeyay waqtiga lacag bixinta. Iyo si loo ogaado waxa xadkaasi noqonayo, bangigu wuxuu hubiyaa inuu daraasad ku samaynayo jiritaanka macmiilka, si uu awood ugu yeesho inuu qeexo haddii macaamilku leeyahay qarash-garayn xagga maaliyadeed ah iyo waa maxay heerka xallintu.
Tani habka bixinta Aad ayey faa'iido u leedahay marka alaab la helayo xilli aanan haysan lacag caddaan ah ama aan awoodno inaan daboolno xoogaa kharash ah oo aan horay loo sii qorsheyn oo aan miisaaniyadda lagu qorsheynin, laakiin waxa aan is beddeli doonin waa in lacagta la soo celiyo, tanna waa waxaa lagu sameyn karaa 3 qaab oo kala duwan, aan aragno waxa kuwan yihiin.
Habka koowaad bixi amaahdu waa dhamaadka bishaTan macnaheedu waxa weeye in lacag-bixinta la bixinayo maalin cayiman oo bisha ah ee xigta markii la iibsaday. Tan macnaheedu waxa weeye, haddii aan wax soo iibsanno 20-ka Janaayo, waa in bixinta la daboolaa, tusaale ahaan, Febraayo 15. Si aan ugu hoggaansano lacag-bixintaan waxaa muhiim ah inaan si cad u caddaynno maalinta la yiri lacag-bixinta waa in la bixiyaa, haddii kale waa in lagu xisaabtamo in nalagu soo oogi doono ganaaxyo ayna u horseedi karto ciqaab.
Dariiqa labaad ee aan karno sameyso bixinta amaahda Waa boqolkiiba, tan waxay ka dhigan tahay in bil kasta oo soo socota aan bixin doono lacag caddaan ah si aan u awoodno inaan daboolno wadarta kharashka iibka. Tusaale ahaan, haddii aan soo iibsanno 100 euro, inta lagu guda jiro 5-ta bilood ee soo socota waa inaan bixinnaa 20 euro si aan u awoodno daboolidda wadarta lacagta; Si loo hubiyo in tani aysan dhalin qarash dheeri ah, waa in si wanaagsan naloogu wargaliyaa shuruudaha bangigu u soo bandhigayo nooca lacag bixinta.
Dariiqa saddexaad ee jira sameyso bixinta amaahda waa iyada oo loo marayo khidmad go'an; Habkan sidoo kale waxaa loo yaqaan ereyga rogista; waana hab xiiso leh oo u oggolaanaysa adeegsadaha inuu xakameyn ballaaran ku yeesho miisaaniyaddooda, maaddaama xaaladdan ay tahay inaan bixinno shax horay loo dejiyay. Sidan ayaan ku maareyneynaa inaan xakameyno kharashyada oo aan ka hortagno kharashyada aan la fileynin inay isbeddel lama filaan ah ku sameeyaan dhaqaalaheena shaqsiyadeed.
Qeybtii hore waxaan xaqiiqdii ku aqoonsanay in amaahdu waxay u oggolaaneysaa maalgelinta iibsigeenna. Farqigaas u dhexeeya amaahda iyo debitku waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, si kastaba ha ahaatee waxaan u caddeyneynaa si toos ah.
Markaan wax ku iibsaneyno kaarka deynta, waxaan bixinaa wadarta qadarka iibkeena. Qaab noocan oo kale ah haddii aan heysano 100 euro oo ah koontadeena, oo aan iibsanay 20 euro. Wadarta lacagteenu waxay noqon doontaa 80 euro. Faa'iidada ugu weyn ee tan waa inaanan wax deyn ah la kulmin oo aan sidoo kale ka fogaanno dulsaarka suurtagalka ah ee deynta ay abuurto.
Dhinaca kale kaarka amaahdu wuxuu noo oggolaan lahaa inaan sameyno bixinta isla xisaab ah 20 euro, laakiin dib loo dhigay, laga yaabee 5 bilood inaan bixin doono 4 euro bishii. Faa'iidada ugu weyn ee deynta ayaa ah iyadoo aanan bixin wadarta guud tan iyo inta lacag bixinta la bixiyay, waxaan heli doonnaa lacago loo isticmaali karo in lagu daboolo kharashyada horay loo sii qorsheeyay, waxayna xitaa na siineysaa suurtagalnimada bixinta deymo kale.
Aad ayey muhiim u tahay inaan xoojino in labada kaarba ay leeyihiin faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka, sidaas darteed midkoodna kaligiis ma dhaamo midka kale. Si kastaba ha noqotee, aad ayey muhiim u tahay inaan baranno inaan xakameyno kharashyadayada si aan u ogaanno nooca lacag-bixinta ugu fiican xaaladdeena.
Aynu soo qaadanno tusaale dhab ah.
Si dakhligeena billaha ah Waxay yihiin 600 euro, miisaaniyaddeenna billaha ahna waxaan uga baahannahay 450 euro si aan ugu daboolno baahiyaheenna sida dharka, cuntada, adeegyada, iwm. Taasi waxay nooga tagaysaa 150 euro oo aan ugu adeegsan karno ficil kasta oo aan dooneyno. Marka ugu horeysa, waa inaan isweydiino haddii ay kafiican tahay in 450-ka euro lagu bixiyo deyn, taasi waxay nooga tagaysaa oo keliya sanduuq dhan 150 euro, dhanka kale haddii aan maalgalino 450-ka yuuro waa inaan daboolnaa. 9 bixinta 50 euro bishii.
Haddii aan sii wadno tusaalaha 9-ka bilood ee soo socota, waxay na siinaysaa natiijo ahaan inaan haysanno sanduuq dhan 2700 euro, lacag-bixinteena bil kasta waxay noqonaysaa 450 euro, waana 10-kii bilood ee ay dhaqaalaheennu xasilloon yihiin; iyo sidoo kale, waa inaanan ilaawin in bil kasta aan aruurinay 150 euro oo bilaash ah, sidan oo kale waxaan haysannaa sanduuq bilaash ah oo ah 1500 euro, tanina waxay ku kordheysaa 150 euro bil kasta iyadoon saameyn ku yeelan dhaqaalaheena.
Ilaa hada, the maalgelinta waxay umuuqataa ikhtiyaar macquul ah, runtiina waa sidaas, maxaa yeelay ma haysanno oo keliya keydkeenna oo ah 1500 euro, laakiin qaddar ah 2700 euro, oo in kastoo ay horeba ugu sii talo galeen inay daboosho kharashyadeena billaha ah, loo isticmaali karo haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Laakiin ka hor intaanan go'aansan haddii tani ay tahay wax waxtar leh ama aan ahayn, waa inaan ka fikirnaa kuweenna caadooyinka dhaqaaleHagaag, xusuusnow in tusaalaha la xisaabiyay iyadoo loo malaynayo inaan lahaanay dhaqanno wanaagsan oo aan ku badbaadin karno 150 Yuuro oo haray.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan u qaadanay inaanan bixin wax ka mid ah 450 bishiiba, laakiin aan u keydinay si aan u dabooli karno Bacriminta. Marka, haddii aynaan lahayn dhaqanno badbaadin oo wanaagsan, ama aan nahay dad sida ugu macquulsan u isticmaali doona lacagtaas halkii aan ka uruurin lahayn, waxaa suurtagal ah in dhammaadku uusan sidaa rajo lahayn, oo aynaan gelin doonin xoogaa dhibaatooyin dhaqaale ah.
Farqiga kale ee aasaasiga ah ee u dhexeeya deynta iyo deynta amaahdaasi badanaa waxay dhalisaa a ururinta dulsaarka hay'adda bangiga. Guud ahaan, tirada dulsaarku waxay kuxirantahay mudada aan dooneyno inaan kubixino bixinta, hadii ay dheertahay, danaha badanaa wey sarreeyaan inkasta oo dulsaarku isku mid yahay.
Tan dambe waxaa sabab u ah xaqiiqda jirta inuu jiro waqti isku dhaf ah, sidaa darteed si aan awood ugu yeelano inaan u xisaabino si sax ah, waa inaan codsanaa heerka dulsaarka iyo muddooyinka isku dhafan ee aan ku sameyneyno lacag bixinta.
Dhinaca kale, gudaha xisaabaadka deynta Ma jiraan wax dulsaar ah, laakiin xaaladaha qaarkood guddi ayaa la bixin karaa inay ku leeyihiin koontadayada bangiga la sheegay, tani sidoo kale aad ayey muhiim u tahay inaan weydiino lataliyeyaasheena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Banca » Farqiga u dhexeeya amaahda iyo deynta
Aagga Xarunta Ganacsiga dijo
Salaan: waa macluumaad aad u dhameystiran oo wax ku ool ah si loo ogaado faraqa u dhexeeya amaahda iyo deynta. Tusaalaha ku iibsiga kaarka ayaa aad u caddaynaya. Salaan.
Ku soo jawaab Aagga Xarunta Ganacsiga
Waa wax lala yaabo inaan u isticmaalno ereyga "kaarka amaahda" beddelasho ahaan iyo kaararka deynta. Waad ku mahadsantahay cadeynta farqiga. Dhamaan wanaag.
Ku jawaab Taylor
Inypsa iyo Urbas ayaa hogaaminaya kor u kaca suuqa saamiyada Isbaanishka
USA vs sinaanta yurub